Sida looga takhaluso arintaas Pesky -2 ee la socota WordPress Slugs | Martech Zone
Jimco, Febraayo 6, 2015 Jimco, Febraayo 6, 2015 Douglas Karr
Waxaan rajeynayaa inaanan ahayn kan kaliya ee tan i dhiba, laakiin runtii waan necbahay markaan ku daro qayb ka mid ah barta WordPress-ka iyo URL-ka oo isu beddela wax / qaybta-2 /.
Muxuu WordPress ugu daraa -2?
Calaamadahaaga, qaybahaaga, bogaggaaga iyo qoraalladuba dhammaantood waxay leeyihiin a slug taasi waxaa lagu qeexay hal miis oo aadan ku heli karin wax nuqul ah inta udhaxeysa sedexda aag. Waxa sida caadiga ah dhacaa waa inaad leedahay bog, dhejis ama sumad taas oo leh xoqitaan sidaa darteed ma awoodid inaad u isticmaasho sida isugeynta qaybta. Intii aad taas kuu sheegi lahayd, WordPress ayaa si fudud lambar ugu siinaya -2. Haddii aad markale sameysay, waxay ku dari laheyd -3, iyo wixii la mid ah. Slugs waa inay ahaadaan kuwa gaar u ah dhamaan nidaamka maareynta maaddada oo dhan.
Waa kuwan shaashadda arrinka mid ka mid ah macaamiisheenna.
Sideen U Dayactiraa -2?
Marka hore, waxaad u baahan doontaa inaad ka raadsato bogag, dhejino, iyo calaamado magaca jilicsan ee aad rabto inaad yeelato. Markaad hesho, waxaad u baahan doontaa inaad wax ka beddesho boggaas, dhajiso iyo / ama calaamadee si aad ula soo baxdo xoqitaan kale. Badanaa maahan, waxaan u aragnaa inay tahay sumad oo ka saar sumadda mid kasta oo ka mid ah qoraallada. Si tan loo sameeyo:
Nooca magac slug in aan raadineyno goobta baaritaanka ee bogga tag.
Liis ay ku qoran yihiin qoraalada lagu isticmaalay sumadda ayaa hadda la taxay.
Tirada farriimaha ee sumadda loo adeegsaday ayaa lagu muujiyey dhinaca midig ee tagga.
Guji tiradaas waxaadna heli doontaa liiska mid kasta oo ka mid ah qoraallada sumadda lagu isticmaalo.
Riix Joogay qoraal kasta, ka saar sumadda, oo keydi boostada.
Ku noqo bogga tagga, raadi tagga, waana inaad aragto in sumaddu ku qoran tahay 0 farriimo.
Hadday 0 tahay, tirtir sumadda.
Hadda tag waa la tirtiray, waad cusbooneysiin kartaa qaybta isku xigxiga oo waxaad ka saari kartaa -2.
Weli maadan dhameyn!
Maaddaama boggaga qaybta boggaaga laga yaabo in lagu muujiyey natiijooyinka raadinta, waxaad u baahan doontaa inaad ku beddesho URL-kii hore oo leh -2 URL-ka cusub la'aantiisa.
Tags: qaybta slugtirtir tagbogga isugeyntadhajinta slugka saar tagslugsslug tagcusbooneysiinWordPress